ဦးမင်းလွင် | Rev.U Min Lwin
All posts by ဦးမင်းလွင်
Posted by ဦးမင်းလွင် on 08/04/2020
ပဿခါပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ အဲဂုတ္တုတွင် နှစ်ပေါင်းလေးရာ ကျွန်အဖြစ် နေခဲ့ရသည်။ မောရှည်လက်ထက်ရောက်သောအခါ မောရှည်ကို စေလွှတ်ပြီး ဖာရောဘုရင်ထံ ပြောရမည့် စကားကို ပြောခိုင်းခဲ့သည်။ ပြောသည့်စကားကတော့ ငါ့လူတွေကို လွှတ်ပေးပါ တဲ့။
မောရှည်က ဘုရားသခင်ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်း ဖာရောဘုရင်ကို သွားပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဘုရင်က ခေါင်းမာတဲ့အတွက် ဘုရားစကားကို နားမထောင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်က မောရှည်နဲ့အတူရှိကြောင်း သက်သေထူဘို့ ဘေးဒါဏ်တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပေးခြင်းဖြင့် သက်သေထူခဲ့သည်။ အဲဒီဘေးဒါဏ်တွေ ခံစားပြီးတိုင်းမှာ ကျေးဇူးပြု၍ အဲဒီကပ်ဘေးတွေ ရပ်တန့်ပေးပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်မှာတော့ ခေါင်းမာမြဲ ခေါင်းမာနေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ပြုမြဲ၊ ဒုက္ခပေးမြဲ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအခါ မောရှေက၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သန်းခေါင်အချိန်၌ အဲဂုတ္တုပြည်အလယ်သို့ ငါထွက်သွားမည်။ ၅နန်းထိုင်သော ဖာရောဘုရင်၏ သားဦးမှစ၍၊ ကြိတ်ဆုံနောက်၌ ထိုင်သော ကျွန်မ၏သားဦး တိုင်အောင်၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ ရှိသမျှသော သားဦးတို့နှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏ သားဦးရှိသမျှတို့သည် သေကြလိမ့်မည်။ ၆အဲဂုတ္တုပြည်တရှောက်လုံးတွင်၊ ရှေးကာလ၌ မဖြစ်စဖူး၊ နောင်ကာလ၌လည်း မဖြစ်လတံ့သော ကြီးစွာသော ငိုကြွေးခြင်း ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ’” (Exodus 11:4-6)
အဲဒီနောက်မှာ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးတွေ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြခဲ့တယ်။ မိသားစုတိုင်းက အခါလည် သိုးတစ်ကောင်ကို ယူရမယ်။ အပြစ်မပါရဘူး။ အကောင်းဆုံး အကောင်ဖြစ်ရမယ်။
လူများမေ့နေတတ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက ဘုရားသခင်ကို အကောင်းဆုံးပေးရမယ်ဆိုတာ မေ့နေတတ်ကြတယ်။ မိမိအတွက်တော့် အကောင်းဆုံးတွေ ယူထားတတ်ကြတယ်။ အခု သိထားရမှာက ဘုရားသခင်က အကောင်းဆုံးသော အကောင်ကိုယူခိုင်းတယ်ဆိုတာက အကောင်းဆုံးသော အကောင်ကို ဘုရားသခင်အတွက် ပေးပါလို့ ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အကောင်းဆုံးအရာတွေကို ပေးမယ်ဆိုရင် ဘုရားသခင်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို အကောင်းဆုံးအရာ‌တွေ ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟုဿုပ်ပင်ညွန့်တစည်းကို ယူ၍ အင်တုံ၌ထည့်သော အသွေးထဲမှာနှစ်ပြီးလျှင်၊ တံခါးထုပ်တံခါးတိုင် နှစ်ဘက်တို့ကို ထိုးသုတ်ကြလော့။ ထိုနောက်မှ နံနက်တိုင်အောင် အဘယ်သူမျှ မိမိအိမ်တံခါးပြင်သို့ မထွက် မသွားရ။ (Exodus 12:22)
တချိန်ထဲမှာ ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်မယ့်အရာက
“ဟုဿုပ်ပင်ညွန့်တစည်းကို ယူ၍ အင်တုံ၌ထည့်သော အသွေးထဲမှာနှစ်ပြီးလျှင်၊ တံခါးထုပ်တံခါးတိုင် နှစ်ဘက်တို့ကို ထိုးသုတ်ကြလော့။ ထိုနောက်မှ နံနက်တိုင်အောင် အဘယ်သူမျှ မိမိအိမ်တံခါးပြင်သို့ မထွက် မသွားရ။ ၂၃အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် အဲဂုတ္တုလူတို့ကို ဒဏ်ခတ်ခြင်းငှာ ထုတ်ချင်းခတ်သွားတော်မူ မည်။ တံခါးထုပ်နှင့် တံခါးတိုင်နှစ်ဘက်၌ရှိသော အသွေးကို မြင်သောအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည် တံခါးကို လွန်သွားတော်မူမည်။ ဖျက်ဆီးသောသူသည် သင်တို့ကို ဒဏ်ခတ်ခြင်းငှာ၊ အိမ်ထဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မမူ။
“အကြောင်းမူကား၊ ယနေ့ညဉ့်တွင် အဲဂုတ္တုပြည်ကို ငါသည် ထုတ်ချင်းခပ်သွား၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ရှိသော လူတို့၏ သားဦးများနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏ သားဦးများအပေါင်းတို့ကို ဒဏ်ခတ်၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၏ ဘုရားတို့ကို တရားစီရင်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ ၁၃သိုးသငယ်၏ အသွေးသည် သင်တို့နေရာအိမ်၌ သင်တို့၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်၍၊ ထိုအသွေးကို ငါမြင်သောအခါ၊ သင်တို့ကို ငါလွန်သွားမည်။ ထိုသို့ အဲဂုတ္တုပြည်ကို ငါသည် ဒဏ်ခတ်သောအခါ၊ ဖျက်ဆီးခြင်း ဘေးဥပဒ်သည် သင်တို့ကို မသင့်မရောက်ရ။.” (Exodus 12:12-13)
ဣသရေလ လူမျိုးတို့သည် ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်း ဟုသုတ်ပင်ညွန့်ကို ယူပြီး အင်ဒုံထဲက အသွေးမှာ နှစ်ပြီး တခါးထုပ် တံခါးတိုင်တွေမှာ သုတ်ထားလိုက်တယ်။ အဲဒီညမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ တရားစီရင်ခြင်းက အဲဂုတ္တုမှာ ရောက်ရှိလာပြီး တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကို ငိုသံတွေ ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းကင်တမန်က အသွေးသုတ်ထားတဲ့ အိမ်တွေကိုတော့ ကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။
Exodus 12:33 ကပြောတာက အဲဂုတ္တုလူတွေက မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ဟေဗြဲလူတွေကို မြန်မြန်ထွက်သွားဘို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုကြတယ်။ ငါတို့ အားလုံးသေရတော့မယ်။ မြန်မြန်သွားတော့ လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်း လေးရာကျွန်ခံရတဲ့ သူတို့ဘဝတွေ လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်ပြောတာက , “ဤနေ့ရက်သည်လည်း သင်တို့အောက်မေ့စရာဘို့ဖြစ်၍၊ သင်တို့၏အမျိုး အစဉ်အဆက်မပြတ် ဤနေ့ရက်၌ ထာဝရဘုရားအား ပွဲခံရကြမည်။ ပညတ်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ထိုပွဲကို အစဉ်အမြဲ ခံရကြမည်။ (Exodus 12:14)
ယခုအခါ နှစ်ပေါင်း (၃၅၀၀) ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ဣသရေလလူမျိုးများသည် ယနေ့တိုင် ထိုပွဲတော်ကို မမေ့မလျော့ ကျင်းပနေဆဲဖြစ်သည်။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 08/05/2018
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	5 Comments
အခြေပြုကျမ်းချက်။ ။လုကာ ၈း၅-၈
ကျွနု်ပ်တို့ ခရစ်ယာန်နှင့် အခြား ဘာသာများအကြား အဓိက ခြားနားချက်တစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့နှင့် ဆက်ဆံရေးရှိရန် အလွန်ပြင်းပြသော ဆန္ဒရှိသော အရှင်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်ရှိသော ဆက်ဆံရေး အပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ ဆက်သွယ်ရေး ဆိုသောအရာ မရှိလျှင် ဆက်ဆံရေး ဆိုသောအရာ မရှိနိုင်။ သင်သည် တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို စကားပြောရမည်။ သူပြောသည်ကို နားထောင်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးဆိုသည်မှာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယေက် ပိုမို သိကျွမ်းလာစေရန် အထောက်အကူပေးသည်။ ပျော်ရွှင်စရာ ဆက်ဆံရေးဆိုသည်မှာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး မရှိဘဲ တည်ဆောက်၍ မရနိုင်ပါ။ ဆက်ဆံရေး မရှိလျှင် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးစေခြင်း၊ အမြတ်ထုပ်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ကောင်းသော ဆက်ဆံရေးဆိုသည်မှာ ထိုအရာများ မပါရှိပါ။
ဓမ္မဟောင်းမှ ဗာဗုလုန် ရဲတိုက်ကြီးများ ဆောက်လုပ်သည့် အဖြစ်အပျက်ကို သင်မှတ်မိပါသလား။ အဘယ်ကြောင့် ထိုလုပ်ငန်းကြီး ရပ်ဆိုင်းသွားရသည်ကို မှတ်မိပါသလား။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဆက်သွယ်မှု မပြုနိုင်သော ထိုအချိန်တွင် ထိုလုပ်ငန်းကြီး ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရသည်။ လူများက ဘုရားသခင်ထက် ကြီးမား ကြီးမြတ်ခြင်းကို တောင့်တ ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က လူတို့တွင် ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးတို့ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ဆက်ဆံရေးဆိုသော အရာသည် ပျက်ဆီးသွားခဲ့သည်။ ထိုလူများ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် မဆက်သွယ် နိုင်လျှင် သူတို့၏ အောင်မြင်မှုနှင့် သူတို့၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများ ဘယ်သောအခါမှ ရှိလာမည် မဟုတ်ကြောင်း ဘုရားသခင်က သိရှိခဲ့ပါသည်။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် နားလည်မှု မရှိနိုင်သည့် အချိန်မှ စတင်ကာ ဆက်ဆံရေး ကျဆုံးသွား ခဲ့ကြသည်။
အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိရန် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
ဤအချက်သည် မိသားစုများ အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ဖော် ဆောင်ဖက်များ အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ သင်နှင့် အဆက်အသွယ် ပြုလျက်ရှိသော အခြားသူများ အတွက် သော်လည်းကောင်း မှန်ကန်လျက်ရှိပြီး ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး တွင်လည်း အလားတူပင် ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားသွားပါက သင်၏ အကျိုး ဖြစ်ထွန်းမှုများလည်း ဆုံးရှုံးသွားရပါလိမ့်မည်။
ယခု ကျွနု်ပ် ဝေငှလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်ဆံရေး မည်သို့ တည်ရှိနိုင် မည်နည်း ဟူသည့် အကြောင်း အရာပင် ဖြစ်ပါ၏။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို မည်သို့ ကြားကြ ပါသနည်း။ ကျွနု်ပ် ယခု ဖတ်လိုသော ကျမ်းတော်မြတ်မှာ ရှင်လုကာ အခန်းကြီး (၈) တွင် တွေ့ရသော အကြောင်းအရာပင် ဖြစ်ပေ၏။
မျိုးစေ့ ကြဲသောသူသည် မျိုးစေ့ကို ကြဲခြင်းငှါ ထွက်သွား၏။ အစေ့ကို ကြဲသည်တွင် အချို့သော အစေ့တို့သည် လမ်း၌ ကျသဖြင့် ကျော်နင်းခြင်းကို ခံရ၍ မိုဃ်းကောင်းကင် ငှက်တို့သည် ကောက်စားကြ၏။ အချို့သော အစေ့တို့သည် ကျောက်ပေါ်၌ ကျသဖြင့် အပင်ပေါက် သောအခါ မြေသြဇာမရှိ သောကြောင့် ညှိုးနွမ်း ပျက်စီးခြင်း သို့ရောက်ကြ၏။ အချို့သောအစေ့ တို့သည် ဆူးပင်တို့တွင် ကျသဖြင့် ဆူးပင် တို့သည် အတူပေါက်၍ ညှင်းဆဲကြ၏။ အချို့သော အစေ့တို့သည် ကောင်းသောမြေ၌ ကျသဖြင့် အပင်ပေါက်၍ အဆတရာပွါးများ၍ အသီးသီးကြ၏။ ဟုမိန့်တော်မူပြီးမှ၊ ကြားစရာ နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေဟု ကြွေးကြော်တော်မူ၏။ (ရှင်လုကာ ၈း၅-၈)
ဤကျမ်းပိုဒ်၏ စကားလုံး တစ်လုံး ဖြစ်သော “ကြားစရာ နားရှိသောသူ” ဆိုသော စကားလုံးကို သတိရပါ။ သခင် ယေရှုက မိမိ၏ တပည့်တော်များကို နားထောင်မှုသည် မည်မျှ အရေးပါကြောင်းကို နားလည်ရန် ဖော်ပြသော စကားလုံး ဖြစ်ပေ၏။
သခင်ယေရှုက ထိုဥပမာ၏ အ နက်အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်လုကာ ၈း၁၁-၁၈ တွင် ဖော်ပြခဲ့ပါ၏။
ထိုဥမာ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကား၊ မျိုးစေ့သည် ဘုရားသခင်၏ တရားစကားဖြစ်၏။ လမ်း၌ရှိသောသူကား၊ တရား စကားကို ကြားသည် ရှိသော်၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်စေခြင်းငှါ၊ မာရ်နတ်သည် လာ၍ တရား စကားကို နှလုံးထဲမှနှုတ် ယူသောသူကို ဆိုလိုသတည်း။ ကျောက် ပေါ်၌ ရှိသော သူကား၊ တရားစကားကိုကြား၍ ဝမ်းမြောက်သော စိတ်နှင့် ခံယူသော်လည်း စိတ်နှလုံး၌ အမြစ်မစွဲ၊ ခဏသာ ယုံကြည်သဖြင့် စုံစမ်း နှောင့်ရှက် ခြင်းကို ခံရသောအခါ ဖောက်ပြန်သောသူကို ဆိုလိုသတည်း။ ဆူးပင်တို့တွင် ရှိသောသူကား၊ တရား စကားကို ကြားသည် ရှိသော်၊ လောကီ စိုးရိမ်ခြင်း၊ စည်းစိမ်ကြွယ်ဝခြင်း၊ ကာမဂုဏ် ခံစားခြင်း တို့သည် နှိပ်စက်၍ အသီးမသီး သောသူကို ဆိုလိုသတည်း။ ကောင်းသောမြေ၌ ရှိသောသူကား၊ ဖြောင့်မတ်စင် ကြယ်သော စိတ်နှလုံးနှင့် တရားစကားကို ကြားလျှင်၊ စွဲလမ်း သောအားဖြင့် မြဲမြံစွာ အသီးသီးသော သူကို ဆိုလိုသတည်း။
ဆီမီးထွန်းပြီးလျှင် အိုးမှောက်၍ဖုံးထားလေ့မရှိ။ ခုတင်အောက်၌လည်းထားလေ့မရှိ။ ဝင်သောသူ သည် အလင်းကိုမြင်စေခြင်းငှါ ဆီမီးခုံအပေါ်မှာ တင်ထားလေ့ရှိ၏။ ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ ရှိသမျှတို့သည် ထင်ရှားလိမ့်မည်။ ဝှက်ထားလျက် ရှိသမျှတို့သည်လည်း ထင်ရှားစွာပွင့်လင်းလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် သင်တို့သည် အဘယ်သို့ကြား နာရသည်ကို သတိပြုကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ အကြင်သူသည် ရတတ်၏။ ထိုသူအား ပေးဦးမည်။ အကြင်သူသည် ဆင်းရဲ၏။ ထိုသူ၌ ဥစ္စာရှိဟန်ဆောင်သမျှကိုပင် နှုတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အထက် ဖော်ပြပါ အခန်းငယ် (၁၈) သခင်ယေရှုပြောကြားချက်တွင် “သင်တို့သည် အဘယ်သို့ ကြားနာ ရသည်ကို သတိပြုကြလော။” ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
အခန်းငယ် (၈) တွင်သော်လည်းကောင်း၊ အခန်းငယ် (၁၈) တွင်သော်လည်းကောင်း သခင်ယေရှု ပြောကြား ချက်တွင် နားထောင်ရန် ပြောပါသည်။ နားထောင်ခြင်းသည် ဆက်ဆံရေး အလွန် ရေးကြီးပါ၏။ သင်သည် အခြားလူပြောသော စကားကို နားမထောင်ပါက သင်သည် ထိုသူနှင့် ဆက်သွယ်နေသည်ဟု မပြောနိုင်ပါ။
ဤပုံဥပမာ ပြောကြားချက်တွင် လူတို့၏ နားထောင်ခြင်း (၄) မျိုးကို မြင်တွေ့မိပါသည်။ နားထောင်မှု ပုံစံလေးမျိုး ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
၁။ အချို့သောလူများသည် နားထောင်ခြင်းကို လုံး၀ စိတ်မဝင်စားကြပါ။
မျိုးစေ့ကြဲသောသူသည် မျိုးစေ့ကိုကြဲခြင်းငှါ ထွက်သွား၏။ အစေ့ကို ကြဲသည်တွင် အချို့သောအစေ့တို့သည် လမ်း၌ကျသဖြင့် ကျော်နင်းခြင်းကိုခံရ၍ မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် ကောက်စားကြ၏။ (လုကာ ၈း၅)
လမ်းပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးရန် မျိုးစေ့ချသည်။ ဤသည်မှာ နားမထောင်ခြင်းသဘောပင် ဖြစ်ပေ၏။
သမ္မတကြီး ဖရန်ကလင် ရုစဗဲ့ နှင့် ပတ်သတ်သော အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ကျွနု်ပ်ကြားဘူးပါသည်။ သူသမ္မတဖြစ်စဉ်အခါ အိမ်ဖြူတော် ကြိုဆိုရေး ဝန်ထမ်းများသည် တာဝန် ဝတ္တရားအရ သာမာန် နားထောင်ရုံ မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုသော ညနေခင်းတွင် သူ၏ စကားကို မည်မျှ အလေးထား နားထောင် သည်ကို သိရှိရန် လေ့လာမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့သည်။ သူ့ထံသို့ လာရောက်သောသူများသည် အပြုံး ချိုချိုလေးများဖြင့် လာရောက်လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ကြချိန်တွင် သမ္မတကြီး ရုစဗဲ့က အပြုံးမျက်နှာဖြင့် “ဒီမနက် ကျွန်တော်ရဲ့ အဖွား အသက်ခံရတယ်ဗျာ” ဟုပြောလိုက်ရာ ထိုသူတို့က ပြန်လည်တုန့်ပြန်ကြသည်မှာ “တကယ် ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ် သမ္မတကြီးရယ်” “ကြားရတာ ဘယ်လောက်တောင် ချိုမြိန်လိုက်သလဲဗျာ” စသည်ဖြင့် တုန့်ပြန်ကြသည်။ ထိုအခါ သမ္မတကြီး ရုစဗဲ့ နားလည်သဘောပေါက်လိုက်သည်မှာ ထိုသူတို့ အားလုံးသည် သူ၏ စကားကို ကောင်းစွာ နားမထောင်ကြကြောင်း သိရှိခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သံတမန်တစ်ဦးနှင့် လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ချိန်တွင် “ကျွန်တော့်အဖွား ဒီမနက်အသက်ခံရတယ်ဗျာ” ဟူ ပြုံးပြီး ပြောလိုက်ရာ ထိုသံတမန်သည် အနည်းငယ် အံ့အားသင့်သော အမှုအရာဖြင့် တုန့်ပြန်ခဲ့သော်လည်း ပြန်ပြောခဲ့သည်မှာ “သေချာပါတယ်ဗျာ။ ဒီမနက် သူလာမှာပါ” ဟု ပြောလိုက်လေသည်။
အချို့လူများမှာ လုံး၀ နားမထောင်တတ်ကြပါ။ ထိုကဲ့သို့သော သူများကို သင်တွေ့ဘူးပါသလား။ သင်ဘာပြောနေသည်ကိုပင် ထိုသူသည် မသိ၊ နားမလည်၊ ဂရုမစိုက်ကြ။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသူတို့သည် နားမထောင်ကြပါသနည်း။ အကြောင်းအရင်း အချို့ရှိပါသည်။
က. အချို့လူတို့သည် အလွန်အလုပ်များကြပြီး သူတို့၏ စိတ်အစဉ်မှာ ခက်ခဲမှု ပြဿနာ များကြောင့် နားထောင်နိုင်မှု မရှိကြချေ။
ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောပြချင်ပါသည်။ သူသည် ဆန့်ကျင်တတ်သောသူမဟုတ်။ နားထောင်ရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း သူသည် အလွန်အလုပ်များနေလေ့ရှိပြီး အလုပ်လုပ်ရာတွင် အလွန်လျှင်မြန်သည်။ သို့သော် ဂရုတစိုက် နားထောင်ရန် အမြဲ နှေးကွေးနေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့နှင့် အမြဲ အစဉ်မပြေ ဖြစ်ရကြသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှာ ကြားနာရန် ဆန္ဒရှိကြသည်။ သို့သော်လည်း ကျွနု်ပ်တို့၏ စိတ်အစဉ်သည် အလွန်အလုပ်များသောကြောင့် အာရုံစိုက်ရန် မလွယ်ကူသော အခြေအနေများ ရှိနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကြားရသောအရာ အများရှိသော်လည်း မှတ်သားနိုင်သော အခြေအနေ မရှိကြ။ ထို့ကြောင့် နားထောင်မှုများတွင် ဘာမျှ မမှတ်မိတော့ဘဲ အစဉ်လွတ်သွားလေ့ရှိသည်။
ဘုရားသခင်သည် ယနေ့တွင် သင့်ကို စကားပြောနေပါသည်။ သင်သည် အလုပ်များကို ခဏရပ်ပြီး စကားနားထောင်လိုက်ပါ။ အချို့သောသူများကတော့ နားမထောင်နိုင်လောက်အောင် အလုပ်များနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ခ. အချို့သောသူများသည် နားမထောင်ကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော သူတို့၏ စိတ်သည် ပိတ်ထားကြပြီး သူတို့၏နှလုံးသားများလည်း မာကြောနေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကို စကားပြောချင်ပါသည်။ သို့သော် ကျွနု်ပ်တို့၏ စိတ်အစဉ်နှင့် နှလုံးသားများကို ဖွင့်လှစ်ထားရပါမည်။ ကျွနု်ပ်တို့မှ အချို့သောသူများသည် ဘုရားသခင်ထံမှ စကားတော်ကို နားထောင်ရန် ဆန္ဒမရှိကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွနု်ပ်တို့၏ အချိန်နာရီနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန် မဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့် နားထောင်ခြင်းအမှုကို မပြုလုပ်ကြပါ။ ကျွနု်ပ်တို့ စိတ်အစဉ်နှင့် နှလုံးသားကို ပိတ်ဆို့ထားသော အကြောင်းရင်းများလည်း ရှိနေသည်။ ထိုအကြောင်းရင်းများမှာ
ကျွနု်ပ်တို့၏ အတွေးများမှာ “ဘုရားမလိုပါဘူး။” ” ငါဘာသာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။” ” ငါသိပြီးသားပါ။” ” ငါအားလုံး သိပါတယ်။” ” ငါလက်နဲ့ ငါလုပ်တာ အစဉ်အပြေဆုံးပါဘဲ၊” ” ငါဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။” စသည်ဖြင့် ပြောဆို ထင်မြင်တတ်ကြသည်။ ထိုအရာ အားလုံးမှာ မာန်မာနများပင်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုအရာများသည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို ကြားနာရန် ပိတ်ပင်မှု ဖြစ်စေသောအရာများ ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် လေထဲတွင် စကားပြောသူမဟုတ်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ နှလုံးသားတွင် စကားပြောသူဖြစ်သည်။ သတိရပါ။ ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာများသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး သူ့ကို အစဉ် တန်ဘိုးထားပါ။
ကျွနု်ပ်တို့ နာကျင်ရသည့်အခါတိုင်း ရွေးချယ်မှု တစ်စုံတစ်ရာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အချို့က ပိုကောင်းသောအရာကို ရွေးချယ်ကြပြီး အချို့က ပိုမိုခါးသည်းမှုများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ သူတို့သည် နားမထောင်နိုင်သော အခြေအနေ ဖြစ်သွားသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ နာကျင်ရသည့်အခါတိုင်း တံတိုင်းကြီးများကို တည်ဆောက်မိကြသည်။ ထိုတံတိုင်းကြီးများ၏ နောက်ကွယ်တွင်သာ နေထိုင်မိတော့သည်။ “ဘယ်သူမှ မလာနဲ့” ဟု အော် ဟစ်မိကြသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် ဘုရားသခင်ကိုပင် အပြစ်တင်ပြောဆို မိကြပြီး နားထောင်ခြင်းကို မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပေ။ ခါးသည်မှု များသည် ဘယ်သောအခါမှ ကောင်းမြတ်ခြင်းတရားကို မခံစားနိုင်သော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားတတ်သည်။
အချို့သောသူတို့သည် စကားတော်ကို နားမထောင်ကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို စကားပြောချင်ကြောင်းကို မသိကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရယူချင်ပါသည်။ သူသည် သင်နှင့် စကားပြောချင်နေပါသည်။ သူသည် သင့်ကို ဆက်ဆံမှု (သို့မဟုတ်) ဆက်သွယ်မှု ပြုချင်ပါသည်။ နာထောင်ခြင်းသည် ဆက်သွယ်မှုပြုခြင်းတွင် ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေပါသည်။
နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကို တရားလမ်း၌ သွေးဆောင်တော်မူ၏၊၊ နှိမ့်ချလျက်ရှိသော သူတို့အား ခရီးတော်တို့ကို သွန်သင်တော်မူ၏၊၊ (ဆာလံ ၂၅း၉)
နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့အား မည်သို့ သွေးဆောင်၍ မည်သို့ သွန်သင်ပါသနည်း။ စကားပြောခြင်းဖြင့်သာ ဖြစ်ပါ၏။ နှိမ့်ချခြင်းဆိုသည်မှာ သင်ကြားနိုင်သည့် အခြေအနေ စိတ်သဘောရှိခြင်း အဓိပ္ပါယ်ပင် ဖြစ်ပါ၏။ ဆရာထံမှ နားထောင်ခြင်းအမှုကို ပြုနိုင်သောသူသည်သာလျှင် သင်ကြားပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ တနည်းဆိုရသော် ကြားစရာ နားရှိသောသူသာလျှင် ဘုရားသခင်က စကားပြောတော်မူ၏။
ဘုရားသခင် စကားပြောနိုင်သူ ဖြစ်လာစေရန် သင့်ကို ကျွနု်ပ် အားပေးပါ၏။ ထိုအရှင်သည် နားကန်းနေသူများကို စကားမပြောပါ။ ထိုအရှင်ကိုစကားမပြောနိုင်လောက်အောင် (သို့မဟုတ်) စကားနားမထောင်နိုင်လောက်အောင် အလုပ်များနေသူများကို စကားမပြောပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွနု်ပ်တို့သည် တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍ ကိုယ်တော်၏ စကားကို နားထောင်ဘို့ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နားထောင် တတ်သူသာ ဖြစ်ဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုကဲ့သို့ နားထောင်မည့်သူများကို ရှာဖွေလျက်ရှိပါ၏။
၂။ အချို့သောသူများမှာ နားထောင်သော်လည်း မေ့တတ်ကြ၏။
တရားစကားကို ကြား၍ နားထောင်သော်လည်း မေ့တတ်သူများမှာ ကျောက်ပေါ်တွင် ကျသော မျိုးစေ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သူတို့သည် ကြားခြင်းငှာ လျှင်မြန်ကြသော်လည်း မေ့လျော့ရန်လည်း လွယ်ကူကြ၏။
အချို့သောအစေ့တို့သည် ကျောက်ပေါ်၌ကျသဖြင့် အပင်ပေါက်သောအခါ မြေသြဇာမရှိ သောကြောင့် ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ (လုကာ ၈း၆)
သင်သည် ကျောက်ဆောင်များပေါ်တွင် ဥယျာဉ်ခြံ စိုက်ပျိုးဘူးပါသလား။ သင်သည် ကျောက်ဆောင် ကျောက်ခဲများပေါ်တွင် မျိုးစေ့ကြဲခဲ့လျှင် အစိုဓါတ်ရသည့်အခါ အပင်ပေါက်လာပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ထိုအပင်သည် အမြစ်မစွဲနိုင်သဖြင့် အလျှင်အမြန် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ မြေဆီလွှာ နဲပါးပြီး မြေထုမရှိသောနေရာတွင် အပင်စိုက်ပါက အားနည်းသော အပင်များသာ ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ကြားနာမှု နည်းပါးသည်ဆိုပါက ထိုယုံကြည်သူသည် အားနည်းသော ယုံကြည်သူသာလျှင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လေ့လာရမည်။ ဆင်ခြင်အောက်မေ့ရမည်။ ထိုအရာများကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပါက အားရှိသော ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူများဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။
ကိုယ်ကိုကိုယ် လှည့်ဖြား၍၊ နှုတ်ကပတ်တရားကို နာရုံမျှသာ ပြုသောသူမဟုတ်၊ တရားကိုကျင့်သော သူဖြစ်ကြလော့။ (ယာကုတ် ၁း၂၂ )
အမေရိကန်နိုင်ငံ လေတပ်စခန်းတစ်ခုကို လေ့လာမှု ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကြားသမျှအရာအားလုံး၏ ၉၀.၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကို မေ့လျော့တတ်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
အချို့က အချိန်မကြာသေးသော်လည်း မေ့လျော့ တတ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့နှင့် အရင်းနှီးဆုံး အချစ်ဆုံးသောသူများထံမှ ပြောသော စကားများကိုပင် မေ့လျော့နေတတ်ကြသည်။ “မနက်က ငါ့ကို ဘာလုပ်ဘို့ ပြောခဲ့သလဲ” ဟူသော စကားကို ပြန်လည် မေးမိသော အချိန်တွေ အများအပြား ရှိနေတတ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် စိတ်ထဲတွင် သိမ်းပိုက်ထားသောအရာများ ရှိနေတတ်ကြပြီး ထိုအရာများကြောင့် အားလုံးကို မေ့လျော့သွားကြသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ဆိုသည့်အတိုင်း ကျွနု်ပ်တို့တွင် အချိန်တိုင်း ဖြစ်ပျက်နေသည် မဟုတ်ပါလော။ ဤသည်မှာ ကျွနု်ပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးသည် အခြားအရာများနှင့် ပြည်လျှံနေပြီး ထိုအခြေအနေထဲတွင် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ကို စကားပြောရန် ကြိုးစားနေသည်။ သတိရပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ကို သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော် များနှင့် စကားပြောချင်နေပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့အတွက်သာ စကားပြောချင်သည်မဟုတ်။ သူ၏နှုတ်က ပတ်တော်များနှင့် အညီ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲစေချင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကို ပြောင်းလဲရန် ကြီးသော ဆန္ဒရှိနေပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် တရားတော်များကို ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီး လိုက်လျှောက်ပါ ကျွန်တော်တို့ကို ပြောင်းလဲစေပါ လိမ့်မည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်၏ အရေးပါမှုကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တရားတော်ကို ရှုမှတ်ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်းသည် မျိုးစေ့ကို ကြီးထွားစေသည် အစိုဓါတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။
ထိုပညတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေးထားသမျှအတိုင်း ကျင့်မည်ဟု စောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငှါ ကျမ်းစာကို မဘတ်မရွတ်ဘဲမနေ၊ နေ့ညဉ့်မပြတ်ကြည့်ရှုဘတ်ရွတ်ရမည်။ သို့ပြုလျှင် သင်သည် အကြံထမြောက်၍ အောင်မြင်လိမ့်မည်။ (ယောရှု ၁း၈)
၁အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏၊၊ ကိုယ်တော်ကို ကြိုးစား၍ ရှာပါ၏။ ရေမရှိ သွေ့ခြောက်သော လွင်ပြင်၌ အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည် ကိုယ်တော်ကို ငတ်ပါ၏၊၊ အကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ခန္ဓာ သည်လည်း ကိုယ်တော်ကိုလွမ်းဆွတ်ပါ၏၊၊ ၂ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တော်ကို မြင်ခြင်းငှါ သန့်ရှင်းရာဌာန တော်၌ ထိုသို့ ကိုယ်တော်ကို ဖူးမျှော်ပါပြီ၊၊ ကရုဏာတော်သည် အသက်ထက်သာ၍ ကောင်းသောကြောင့် အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းရပါမည်၊၊ ၄ထိုသို့အသက်ရှင်စဉ်တွင် ကိုယ်တော်ကို ကောင်းကြီးပေး ပါမည်။ နာမတော်ကို အမှီပြု လျက် လက်ကို ချီပါမည်၊၊ ၅အိပ်ရာပေါ်မှာ ကိုယ်တော်ကို အောက့်မေ့၍ ညဉ့်ယံ တို့၌ ကိုယ်တော် ကို ဆင်ခြင်လျက် နေသောအခါ၊ ဆီဥကို၎င်း၊ ဆူသောအသားကို၎င်း စား၍ ဝသကဲ့သို့၊ အကျွနု်ပ်၏ဝိညာဉ်သည် ဝ၍ရွှင်လန်းသောနှုတ်ခမ်းနှင့် အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းပါမည်။ ၆အကျွန်ုပ်ကို မစေတော်မူသောကြောင့် အတောင်တော်အရိပ်၌ ဝမ်းမြောက်ပါမည်။ ၇အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည် ကိုယ်တော်၌ မှီဝဲ၍ လက်ျာလက်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ထောက်မတော်မူ၏၊၊(ဆာလံ ၆၃း၁-၇)
၁၁ထာဝရဘုရား၏ အမှုတော်တို့ကို အောက်မေ့ပါမည်။ ရှေးကာလ၌ ကိုယ်တော်ပြုဘူးသော အံ့သြဘွယ်တို့ကို အောက်မေ့ပါမည်။ ၁၂ပြုတော်မူသမျှ တို့ကိုဆင်ခြင်၍ စီရင်တော်မူသောအရာ တို့ကို မြွက်ဆိုပါမည်။ ၁၃အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏လမ်းသည် သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ယှဉ်ပါ၏။ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ အဘယ်မည်သော ဘုရားသည် ကြီးမြတ်သနည်း။ (ဆာလံ ၇ရး၁၁-၁၃)
၁၄၇မိုဃ်းမလင်းမှီ အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်တတ်ပါ၏၊၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မြော်လင့်လျက် နေပါ၏၊၊ ၁၄၈ဗျာဒိတ်တော်တို့ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့လိုသောငှါ ညဉ့်ယံမလွန်မှီ အကျွန်ုပ်နိုး တတ်ပါ၏၊၊ ၁၄၉အိုထာဝရဘုရား ကရုဏာတော်ရှိသည်အတိုင်း အကျွန်ုပ်စကားကို နားထောင်တော်မူပါ၊၊ စီရင်တော်မူချက်နှင့်အညီ အကျွန်ုပ်ကို အသက်ရှင်စေတော်မူပါ၊၊ (ဆာလံ ၁၁၉း၁၄၇-၁၄၉)
အခုအချိန်ဟာ ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့အား ပြောနေသောအရာကို စတင်သတိရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ ရန် ဖြစ်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားထောင်ရုံမျှသာ (သို့မဟုတ်) ဖတ်ရှုရုံမျှသာ မပြုပါနှင့်။ နှုတ်ကပတ်တော် မျိုးစေ့ကို ကျောက်ပေါ်ကျ၍ အမြစ်မစွဲ နိုင်သောအခြေအနေ မဖြစ်ပါစေနှင့်။
၃။ အချိုသောသူများမှာ နားထောင်သော်လည်း အရေးမကြီးဟု ခံစားသောသူများရှိနေပါသည်။
အချို့သောအစေ့ တို့သည် ဆူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့် ဆူးပင် တို့သည် အတူပေါက်၍ ညှင်းဆဲကြ၏။ (လုကာ ၈း၇)
ဤလူများသည် မျိုးစေ့ကို စိုက်ပျိုးရန် စိတ်အားထက်သန်သူများဖြစ်ပြီး နှုတ်ကပတ်တော်ကို သေချာစွာ နားထောင်သူများနှင့်တူသည်။ သို့သော် သူတို့သည် မြက်ပင် ပေါင်းပင်များကို ဦးစားပေးတတ်သော သဘောလည်း ရှိနေသည်။
ကျွနု်ပ်တို့ ၏ စိတ်ထဲတွင် အခြားအကြံအစည်များနှင့် ပြည့်ဝစည်ပင်လျက်ရှိသည်။ ထိုအကြံအစည်များကိုသာ စိတ်ထဲတွင် စွဲလမ်းနေသည်။ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်ရသော စားဝတ်နေရေး၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စီမံကိန်းများ၊ ပန်းတိုင်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အထွေထွေ အခွန်အခများ၊ ကလေးနှင့်ပတ်သတ်သောအရေးများ. . .စသည်ဖြင့် မရေမတွက်နိုင်သော အရေးများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။။ ကျွနု်ပ်တို့၏ စိတ်တွင် စွဲလမ်းနေသောအရာ (၃) ခုကိုသာ ဖော်ပြပါမည်။
သင်သည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နားထောင်ခြင်းအမှုကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းတွင် လုပ်ဆောင်၍ မရပါ။ ဂရိ ဘာသာစကားတွင် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကို “ခြားနားသော ဦးတည်ချက်သို့ စွဲထုပ်ခံရခြင်း” ဟု အဓိပ္ပါယ် ရှိနေပါသည်။ သင်၏ စိတ်အစဉ်သည် ခြားနားသော လမ်းသို့ ဦးတည်စေရန် ဆွဲထုပ်ခြင်းကို ခံနေရပါပြီလား။ သင်သည် ထိုအရာများကို အာရုံစိုက်နေပါက လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်တွင် ရပ်တည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပေ။ ထိုအရာသည်သာလျှင် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်ပါ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုလမ်းကို လျှောက်ရန် ကျွနု်ပ်တို့တွင် အချိန်မရှိပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏ စိုးရိမ်းပူပင်မှုကို ရပ်တန့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် စိုးရိမ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဘုရားသခင်ထံမှ စကားတော်ကို နားထောင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွနု်ပ်တို့သည် အချိန်တိုင်းတွင် လုံးလောက်သော ငွေကြေးမရှိခြင်းနှင့် ငွေကြေးကို မည်သို့ အသုံးပြုရမည် ဆိုသော ငွေကြေးနှင့်ပတ်သတ်သောအရာများကသာ စိတ်ထဲတွင် ရှိနေပါသည်။ ငါခရီးသွားရင် လောက်ပါ့မလား။ ငွေကြေးကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမလဲ။ ဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲ။ ဘယ်လို ရှာရမလဲ. . . စသည်ဖြင့် ထိုအရာများကသာ လွှမ်းမိုးနေပါသည်။ ယေရှုသည် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သတ်သော အကြောင်းအရာများထက် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့်ပတ်သတ်သော အကြောင်းအရာများသာ ဦးစားပေး ပြောဆိုခဲ့သည်ကို သင် သိပါသလား။ အကြောင်းရင်းမှာ လူများတို့ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သတ်သော အရာများကိုသာ စဉ်းစားတတ်ကြပြီး ကိုယ်တော်၏ အကြံအစည်တော်မှာ သင်စဉ်းစားသော အရာများထက် ပိုကောင်းသော အစီအစဉ်များရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ စိတ်နှလုံးကို ငွေကြေးနှင့်ပတ်သတ်သောအရာများ မလွှမ်းမိုးမိပါစေနှင့်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် အမှန်တကယ် အသက်မရှင်ချင်လောက်အောင် အသက်ရှင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အလုပ်များက ဒုက္ခပေးလျက် ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အနားယူချိန်ပင် မရှိ။ နံနက် မိုးလင်းချိန် မျက်စိနှစ်လုံး ပွင့်သည့်အချိန်မှစ၍ တစ်နေကုန် ညအိပ်ချိန်တိုင်အောင် တစ်နေကုန် လှုပ်ရှားနေရသည်။ အိပ်ရာထဲ ရောက်သည့်တိုင်အောင် နောက်တစ်နေ့ ရင်ဆိုင်ရမည့် ပြဿနာနှင့် အလုပ်များကို စဉ်စားနေကြဆဲ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ အချိန် အကျန်အကြွင်းကိုသာ ရရှိနေရသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို မေ့လျှော့နေတတ်ပြီး အာရုံမစိုက်ကြဘဲ နေကြ၏။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ စကားကို နားမထောင်နိုင်လောက်အောင် အလုပ်များနေကြပါသည်။
ကြွင်းသေးသောစကားဟူမူကား၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ သမ္မာတရားနှင့်ဆိုင်သော အကျင့်၊ လျောက်ပတ်သော အကျင့်၊ ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်၊ စင်ကြယ်သောအကျင့်၊ သူတပါးနှစ်သက်ဘွယ်သော အကျင့်၊ ချီးမွမ်းဘွယ်သော အကျင့် ရှိသမျှတို့ကို၎င်း၊ ပါရမီတပါးပါး၊ ကောင်းသောသီတင်း တပါးပါးနှင့်ဆိုင်သော အကျင့်တို့ကို၎င်း၊ နှလုံးသွင်း ကြလော့။ သင်တို့သည် အထက်ကသင်ယူ၍ ငါ၌ကြားမြင်ခဲ့ပြီးသမျှတို့ကို ကျင့်ကြလော့။ ထိုသို့ကျင့်လျှင်၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၏ အရှင်ဘုရားသခင်သည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူလိမ့်မည်။ (ဖိလိပိ ၄း၈-၉)
ကျွနု်ပ်သည် မှားယွင်းမှုများနှင့်ပတ်သတ်သော နားထောင်ခြင်း အကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပေပြီ။ ယခု မှန်သော လမ်းကိုလည်း တဖန်ကြည့်ပါဦးစို့။
၄။ အချို့သောသူတို့သည် နားထောင်တတ်ကြပြီး ကြားတတ်သော သူများ ဖြစ်ကြ၏။
ဘုရားသခင်က ကြားစရာနား ရှိသောသူများကို စကားပြောလျက်ရှိပါ၏။
အချို့သောအစေ့တို့သည် ကောင်းသောမြေ၌ကျသဖြင့် အပင်ပေါက်၍ အဆတရာပွါးများ၍ အသီးသီးကြ၏။ (လုကာ ၈း၈)
ဘုရားသခင်သည် သင့်ကို စကားပြောချင်နေပါသည်။ အမှန်တကယ်ပင် စကားပြောချင်နေပါသ်ည်။ သင်လက်ခံပါသလား။ သင်သည် ကောင်းသောမြေဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နားထောင်ရန် အစဉ်သင့် ဖြစ်နေပါသလား။ သခင်ယေရှုက သူ၏ နောက်လိုက်တပည့်တော်များအာ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ
ယောဟန် ၁၀း၂၇ ” ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကိုနား ထောင်၍ ငါ့နောက်သို့ လိုက်ကြ၏။ ထိုသိုးတို့ကိုငါသိ၏။”
တစ်ခါက တောရွာရှိ လူငယ်လေးတစ်ဦးသည် သူငယ်ချင်းရှိရာ နယူရောက်မြို့ကြီးသို့ အလည်အပတ်ရောက် ရှိလာခဲ့သည်။ သူတို့သည် ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လည်ခဲ့ကြသည်။ နယူယောက်မြို့ကြီး၏ အလယ် တိုင်းစကွဲယား နေရာ အထိ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်။ ကားသံ၊ လူသံ များဖြင့် ဆူညံလျက်ရှိသော နေရာဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် လူငယ်လေးက “ငါ ပုရစ်အော်သံ ကြားရတယ်” ဟု ပြောလိုက်ရာ သူငယ်ချင်းက “မင်းလာနောက် နေတာလား။ ဒီလို ဆူညံနေတဲ့ မြို့လယ်ကြီးထဲမှာ ဘယ်လိုလုပ် ပုရစ်သံကို ကြားရမှာလဲ။” ဟု ပြန်လည် မေးခဲ့ရာ ထိုတောသား လူငယ်လေးက “မဟုတ်ဘူး။ ငါ သေသေချာချာ ကြားရတယ်” ဟု ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်စလုံး သေချာစွာ ပြန်လည် နားထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ထိုတောသားလေးသည် လမ်းတစ်ဖက်ရှိ အလွန်ကြီးသော ဘိလပ်မြေကန်ကြီးနှင့်စိုက်ခင်းပြုလုပ်ထားသော နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုနေရာတွင် ချုံနွယ်များဖြင့် ပြည့်နေလေရာ ထိုခြုံပုတ်ကြီးထဲတွင် ပုရစ်များ ခိုအောင်းနိုင်သော နေရာ ဖြစ်နေသည်။ မြို့သား ကောင်လေးက တောသားကောင်လေးကို သေချာစွာ ကြည့်လိုက်ပြီး “မယုံနိုင်စရာပါဘဲ” ဟုပြောပြီးနောက် “မင်းရဲ့ နားဟာ စူပါမင်းရဲ့ နားဖြစ်မယ်ထင်တယ်” ဟု ပြောလိုက်၏။ ထိုအခါ တောသားလူငယ်လေးက “ငါ့ရဲ့ နားဟာ မင်းတို့ရဲ့ နားနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ဘယ်အရာကို သေသေချာချာ နားထောင်နေတာလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘဲ ကွဲပြားသွားတာပါ” ဟု ပြန်ပြောလိုက်၏။
ယနေ့ သင်ဟာ မည်ကဲ့သို့သော အသံမျိုးကို နားထောင်နေပါသလဲ။ ဘုရားသခင်ကတော့ သင့်ကို စကားပြောချင်နေပါသည်။
အို… ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်ရဲ့ အသံကို ကြားနိုင်ဘို့ ကျွန်တော့်ကို မစပါ။
ကိုယ်တော့်ကို လစ်လျူရှုသူ မဖြစ်ဘို့ ကျွန်တော့်ကို ကူညီတော်မူပါ။
ကိုယ်တေ်ာ ပြောသောအချိန်တိုင်း ပြောသမျှကို ဘယ်သောအခါမျှ မမေ့သောသူနှင့် အစဉ်သတိရနေပါမည်အကြောင်း ကယ်မတော်မူပါ။
ကျွန်တော်ရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကိုယ်တော်ရဲ့ စကားတော်ကို နားမထောင်နိုင်လောက်အောင် အလုပ်များနေခြင်းထဲမှ ကယ်မ ကူညီတော်မူပါ။
ကိုယ်တော်ရဲ့ စကားတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားမှ ရရှိပြီး ကိုယ်တော်၏ စကားတော်ကို နှစ်သက်တတ်သောသူ ဖြစ်စေတော်မူပါ။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 08/05/2014
ရှေးဦးစွာ Happy Mother day လို့ နှုတ်ခွန်း ဆက်သလိုက် ပါတယ်။ အမေများအားလုံး ဘုရားရှင်ထံပါးမှ ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ်တို့ အတွက် လိုအပ်သော ကောင်းကြီးများ ရရှိ ခံစားကြပါစေ။ အမျိုးသမီး တိုင်းသည် ဇနီးသည်ဖြစ် ရသော အခွင့်ကိုယ်စီရှိ ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဇနီးသည်တိုင်းသည် မိခင်ဖြစ်ရသောအခွင့်ထူးကိုမူ လူတိုင်း မရရှိနိုင် ကြပေ။ ဤထူးမြတ်သော အခွင့်ထူးကို ရရှိပိုင်ဆိုင် ထားကြသော မိခင်များ အသက်တာအတွက် ဘုရားသခင်ကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်မိသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မိခင်များ၏အသက်တာ သည် ခင်ပွန်းသည်များအတွက်သော်၎င်းင်း၊ သား သမီးများအတွက်သော်၎င်းင်း ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ် (၃)ပါး၏ လိုအပ်ချက် ကို အစဉ်ဖြည့်ဆည်းပေးနေ ကြရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွနု်ပ်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်၏မိခင်သည် သူမ၏ ကလေး များနှင့် ခင်ပွန်းသည်အတွက် မိမိကိုဘုရားသခင် ပေးအပ်ထားသောတာဝန်ဟုခံယူပြီး အလွန်ပင် တာဝန်ကျေပြွန်စွာ သက်ဆုံးတိုင် မညည်းမညူဘဲ အနစ်နာခံ အသက်ရှင် လုပ်ဆောင် သွားခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ခင်ပွန်းသည်နှင့် သားသမီးများအ တွက်သစ္စာ ရှိစွာ မပျက်မကွက်ဆုတောင်းပေး ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏ ခံယူချက် သဘောထား ကိုလည်း သားသမီးများအား ပြောပြသွန်သင်ခဲ့ပါသည်။
“မင်းတို့လေးတွေကို ဘုရားသခင်ကငါ့ကို အပ် ထားတာဖြစ်တယ်၊ မင်းတို့အားလုံးကိုငါချစ်တယ်၊ ငါ့ထက်ဘုရားသခင်က ပိုပြီးချစ်တယ်၊ မင်းတို့အား လုံးကို ငါဂရုစိုက်တယ်၊ ငါ့ထက်ဘုရားသခင်က ပို ပြီးတော့တောင် ဂရုစိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့် မင်းတို့ကို ငါချစ်တာထက် ပိုချစ်ပြီး၊ ငါဂရုစိုက်တာထက်ပို ဂရုစိုက်တဲ့ ဘုရားသခင်ကို ငါ့ထက်ပိုပြီးချစ်ပါ။ ဘာ လို့လဲဆိုတော့ မင်း တို့လေးတွေကို သူပိုင်တယ်၊ ငါ ကဆိုင်ပဲဆိုင်တယ်လေ” လို့ ကျွန်တော်တို့တွေကို အသိပေး ဆုံးမခဲ့တာကို ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ခဲ့ပါ။
ကျွန်တော့်လိုပဲ အခြားသော သူများရဲ့ အသက် တာ မှာလည်း သူတို့နဲ့သက်ဆိုင် ခဲ့ရတဲ့ မိခင်များရဲ့ ကောင်းမြတ်မှုများ ဝေငှသက်သေခံ ထားတာကို ခံစားကြည့်ကြပါစို့။
လူငယ်လေး တစ်ဦး..နာမည်ကတော့ W.P.L Mackay ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအသက် (၁၇)နှစ်အရွယ်မှာ တက်္ကသိုလ်တက်ဖို့ အိမ်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိခင်က နှုတ်ကပတ် တော် တစ်ပိုဒ်နဲ့ အတူ သူ့ နာမည်ထိုးထားတဲ့ သမ္မာ ကျမ်းစာအုပ်ကိုပေး လိုက်တယ်။ တက္ကသိုလ် ရောက်တဲ့အခါ သူဟာ ဘဝကို ရေစုန်မျောပြီး အ ပျော် လွန်ကာ မိခင်ပေးလိုက် တဲ့သမ္မာကျမ်းစာ ကို အရက်နဲ့ လဲပြီးသောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိခင် ကတော့ အသက်တာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဒီသားအတွက် ဆုတောင်းပေး ခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံး မှာ W.P.L Mackay ဟာ ဆရာဝန် တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ ဆေးရုံတွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေချိန်မှာ ရောဂါ အတော်ကျွမ်းနေပြီဖြစ် တဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလူနာ ဟာ သူ့ရဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ တောင်းနေတာကိုလည်း သူကြားခဲ့ရတယ်။ မကြာခင် ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ အဲဒီလူနာဆုံး သွားခဲ့ပါတယ်။ Mackay ဟာ အဲဒီလူနာက သူ့ ဘဝအတွက် အတော်အရေးထား၊ တန်ဖိုးထားတဲ့ စာအုပ်ဟာ ဘာစာအုပ်လဲဆိုတာကို သိချင်တာ နဲ့လူနာနေခဲ့တဲ့ အခန်းမှာသွားရှာ ခဲ့တယ်။ အဲဒီ စာအုပ်ကို သူတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ သူအင်မတန် မှအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်က တော့ သူကိုယ်တိုင် အရက်နဲ့ လဲ သောက်ခဲ့တဲ့ မိခင် ပေးထားခဲ့တဲ့၊ သူ့နာမည်ထိုးထားတဲ့ “သမ္မာကျမ်း စာအုပ်” ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ သူဟာ သမ္မာ ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ သူ့မိခင် လိုင်းတားထားတဲ့ ကျမ်း ပိုဒ်များကို အချိန်အတော်ကြာ ဖတ်ရှုဆင် ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့နောက် ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချ တောင်းပန် ဆုပဌနာပြု လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကစပြီး သူဟာ ဆရာဝန် ဘဝကနေ ဘုရားသခင် အတွက် အမှုတော်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ် လာ ပါတယ်။ တစ်ချိန်က သူတန်ဖိုးမထားခဲ့တဲ့သမ္မာ ကျမ်းစာဟာ အခုတော့ သူ့ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်လည်း ကျွန်တော့်အတွက် သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် အထိ ဘုရားသခင်ထံမှာ ဆု တောင်း ဆက်ကပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆုတောင်း ချက်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်နဲ့ အညီဖြစ်ခဲ့ ပါ တယ်။ မိခင်ဆုံးပါးပြီး (၃)နှစ်အကြာမှာ မိခင်ဆု တောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်တော့် ကို အမှုတော်ဆောင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရွေး ကောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိခင်များဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ အတူ သားသမီးများရဲ့အသက်တာမှာ ဘုရားဘုန်း ထင်ရှားဖို့အတွက် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ သာသနာ့ လုပ်ဖော်ဆောင် ဖက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးတွေကိုပြုစု ပျိုးထောင်တဲ့အခါ ခန္ဓာပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အရေးကြီးတာထက် ထာဝရကာလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုရားကို သိကျွမ်း ခြင်းဖြင့် အသက်တာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ရန် အင်မတန် မှအရေးကြီးတာပါတယ်။
ယုံကြည်သူမိခင်အ ယောက်စီတိုင်းအနေဖြင့် မိမိတို့ရဲ့သားသမီးများ ဘုရားသခင်၌ကိုးစားခြင်း၊ သိကျွမ်းခြင်းအရာမှာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ သွန်သင် ပြီးသစ္စာရှိစွာ ဆက်ကပ်ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့် သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာ ဘုရားရဲ့မေတ္တာ၊ အလင်းတရား၊ ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးတွေကို ရရှိခံစားနိုင်စေရန် ဘုရားသခင် ပေးထားသော တာဝန်ကိုသက်ဆုံးတိုင် ဆက်ကပ်လုပ်ဆောင်သွား ကြပါလို့ တိုက်တွန်း နိုးဆော်လိုက်ပါရစေ . . . .။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလထုပ် စိန်ခေါ်သံမဂ္ဂဇင်းမှ ဆရာ ပေါဇံ၏ ရေးသားချက်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။